Allgedo.com » Wasiiru Dowladaha Wasaaradda Isboortiga oo Sheegay in ay Dhisayaan Garoomada Kubadda Cagta ee Dalka
Wasiiru Dowladaha Wasaaradda Isboortiga oo Sheegay in ay Dhisayaan Garoomada Kubadda Cagta ee Dalka
Print here| By: allgedo.com: Monday, April 23, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Muqdisho, Somalia (AOL) – Wasiiru dowladaha wasaaradda shaqada, shaqaalaha, Dhalinyarada iyo Isboortiga C/laahi Sheekh Cali ayaa sheegay in dhawaan ay dhisi doonaan garoomada lagu cayaaro kubadda ee uu dalku leeyahay.
Wasiiru dowladaha oo maanta shir jaraa’id saxaafadda ugu qabtay xafiiskiisa Muqdisho, ayaa ka warbixiyay shir uu ka qeyb galay oo ka dhacay dalka Ruusha kaasoo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa Isboortiga Caalamka.
Mudane C/laahi Sheekh ayaa sheegay in shirka lagu soo bandhigay waxqabadkii madaxdii isboortiga ee ku geeriyootay xarunta Tiyaatarka Qaranka, wuxuuna sheegay in madaxdii uu la kulmay uu kala hadlay sidii ay qeyb uga qaadan lahaayeen dib u dhiska isboortiga dalka Soomaaliya.
Wasiiru dowladaha ayaa sidoo kale sheegay in madaxdii uu la kulmay ay u ballaan qaadeen in ay qeyb ka qaadan doonaan dib udhiska iyo tayeynta ciyaartooyda Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in sidoo kale Hay’adda UNDP uu kala hadlay sidii shaqo abuuris loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga nabad galaan in loo adeegsado hurinta colaadaha dalka ka jira.
Isboortiga dalka Soomaaliya ayaa burbursanaa intii ay burbursanayd dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxaana dowladda KMG ee Soomaaliya ay wadaa dadaallo ay dib ugu dhiseyso ciyaartooydii qaranka Soomaaliyeed.